Pakistan enforce follow-on after bowling out Zimbabwe for 132 in second Test - GulfToday
Babar Azam (centre) positions himself for a catch during the second Test match at Harare Sports Club on Sunday. AP
Pakistan enforced the follow on after bowling hosts Zimbabwe out for 132 on the third day of the second and final Test at Harare Sports Club on Sunday. Pakistan, seeking to complete a sweep of the two-match series, had a first-innings led by 378
Hassan Ali (centre) holds a ball after taking 5 wickets against Zimbabwe. AP
Abid Ali hits double century as Pakistan show Zimbabwe how to play cricket
PCB approaches Emirates Cricket Board to stage remaining matches of PSL in UAE
Abid and Azhar hit centuries to put Pakistan in strong position on opening day
Abid Ali celebrates after scoring 200 runs during the second Test match against Zimbabwe. AP
Pakistan-Zimbabwe Cricket Test Cricket Pakistan Cricket Board International Cricket Council
PCB confirms Pakistan pacer Amir’s retirement from international cricket
In a video apparently recorded in Sri Lanka where he had been playing in Lanka Premier League (LPL), Amir said that he had been "mentally tortured" and didn't want to continue playing under the current PCB management.